ESI MEE KA MPEMPE AKWỤKWỌ NA EXCEL - EXCEL - 2019
Gbanwee na mpempe akwụkwọ na Microsoft Excel
Site n'enyemaka nke "Ihe edeturu" Ị nwere ike ịkọrọ ndị enyi na ndị ọzọ Odnoklassniki na / ma ọ bụ hapụ ihe ncheta dị mkpa maka onwe gị maka ọdịnihu. Ị nwere ike ịmepụta ha na clicks.
Banyere "Ihe edeturu" na Odnoklassniki
Na netwọk mmekọrịta a, onye ọrụ ọ bụla e debara aha nwere ike ide nọmba ole na ole "Ihe edeturu" (posts), tinye ha data mgbasa ozi dị iche iche (foto, vidiyo, mmegharị ahụ), tinye ndị ọzọ ma debe ebe ọ bụla na map. Otú ọ dị, ọ bara uru icheta nke ahụ "Ihe edeturu" Ndị enyi niile nwere ike ịhụ, ma ọ bụrụ na ịnwee profaịlụ na-emeghe, mgbe ahụ, onye ọ bụla na-eleta ibe gị. Dabere na nke a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iche echiche nke ọma tupu ị rụọ post.
N'ụzọ dị mwute, dị otú ahụ "Ihe edeturu"nke naanị gị ma ọ bụ ụfọdụ ndị mmadụ na-apụghị ịhụ na Odnoklassniki. E nwere ike ịmepụta posts na mbụ "Lente". Iji mee nke a, dị nnọọ pịa aha gị, nke e dere na nnukwu mkpụrụedemede na saịtị ahụ.
Itinye "Rịba ama" na PC PC nwere ike ịbụ ngwa ngwa ma dị mfe karịa na ama. Ihe ntụziaka dị na nke a ga - adị ka nke a:
Na ibe gị ma ọ bụ na "Lente" chọta ngọngọ n'elu elu "Gịnị ka ị na-eche?". Pịa ya ka imeghe nchịkọta akụkọ ahụ.
Dee ihe na igbe ederede. Ị nwere ike ịgbanwe ndabere nke ozi ahụ ga-egosipụta, na-eji agba agba gburugburu dị elu nke ụdị.
Ọ bụrụ na ịchọta nke ọma, ịnwere ike ịgbakwunye otu ụdị ọzọ site na ịpị bọtịnụ ahụ "Ederede"emi odude ke nsụhọde ke n̄kan̄ enyọn̄ window. Otú ọ dị, na nke a, enweghi ike itinye okpokoro agba na otu ma ọ bụ nke ọzọ na ederede.
Na mgbakwunye na "Rịba ama" Ị nwere ike itinye foto ọ bụla, vidiyo, egwu, jiri bọtịnụ atọ na aha ndị kwekọrọ n'okpuru ụdị ntinye ederede. Ị nwere ike itinye ma foto, vidiyo na ọdịyo na post n'otu oge ahụ.
Na "Explorer" họrọ faịlụ achọrọ (ọdịyo, vidiyo ma ọ bụ foto) wee pịa "Meghee".
Iji "Rịba ama" Ịnwere ike ịgbakwunye nghoputa site na otu bọtịnụ dị n'aka nri nke ụdị. Mgbe o jiri ya mee ihe, ntọala ntuli elu ọzọ ga-emeghe.
Ị nwere ike ịche ndị enyi ọ bụla n'igbe gị. Ọ bụrụ na ị họrọ mmadụ, mgbe ahụ ịmụrụ anya ga-abịakwute ya.
Ị nwere ike ịhọrọ ebe ọ bụla na map site na ịpị njikọ njikọ ederede "Dee ebe" na ala.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nke a "Rịba ama" naanị na "Ribbon" gị, wee wepụ akara nlele ahụ "Na Ọnọdụ".
Iji bipụta, jiri bọtịnụ ahụ Kwuo.
Usoro 2: Mobile Version
Ọ bụrụ na ịnweghị kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ onwe gị ugbu a, ị nwere ike "Rịba ama" na Odnoklassniki si n'aka smartphone gị, Otú ọ dị, ọ nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya na ihe ọhụrụ karịa na PC.
A ga-atụle ntụziaka site na nkwụsị ụkwụ na ihe atụ nke ngwa ngwa mkpanaaka:
Pịa na elu nke bọtịnụ ahụ. "Rịba ama".
Ọzọkwa n'ụzọ yiri nke ahụ ụzọ 1st, dee ihe.
Iji bọtịnụ dị n'okpuru ebe a, ịnwere ike itinye foto, vidiyo, egwu, nyocha, gosi onye na / ma ọ bụ ebe na map.
Iji mepụta post ka agbasare na ọkwa, tinye akọrọ n'elu ihe ahụ "Na Ọnọdụ". Iji bipụta, pịa na akara ngosi ụgbọelu akwụkwọ.
Na akwụkwọ "Ihe edeturu" Odnoklassniki ọ dịghị ihe siri ike. Otú ọ dị, emela ha ihe ma dee ihe niile dị na ya, dị ka ndị enyi gị na-ahụ ya. Ikekwe ha agaghi enwe obi uto ma oburu na ha nile "Ribbon" A ga-agbanye akụkọ gị na posts gị.